Wadahadal Garowe uga furmaya dowlada federalka iyo maamulka Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Waxaa maanta lagu wadaa in wadahadal uu magaalada Garowe uga furmo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, kadib markii uu shalay halkaas gaaray R/wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Qodobada laga wada hadlayo waxaa ka mid ah: Dastuurka qabyada ah ee lagu dhaqayo federaalka oo Puntland horay u shaacisay in wax ka bedel lagu sameeyey, dhismaha maamulka gobolada dhexe oo isagana Puntland ku andacootay inuu xadgudub ku yahay jiritaankeeda iyo maareynta dhaqaalaha ay Soomaaliy ka hesho caalamka oo Puntland ku doodeyso in Muqdisho oo qura lagu koobay.
R/wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed iyo Madaxweynaha mamulka Puntland C/weli Gaas ayaa labaduba rajo ka muujiyey wada hadalka manta Garowe uga furmaya labada dhinac.
C/weli Gaas ayaa horay ugu dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Federaalka ah, kadib markii dowladda Soomaaliya saxiixday heshiis lagu dhisayo maamulka gobolada dhexe oo ka kooban gobollada Galgaduud iyo Mudug.